“Iyi Inhaka Yevashumiri vaJehovha.”—Isaya 54:17
Kuparidza pachiteshi chezvimota muKhulo
VASHUMIRI vaJehovha vemuGeorgia vari kushanda nesimba pakuparidza mashoko akanaka, uye Jehovha ari kukomborera basa ravo. Izvi zviri kuita kuti mashoko akanaka asvike kunzvimbo dzakawanda munyika yacho.
Vaparidzi vachigadzirira kunoparidza muUshguli, iri panzvimbo yakakwirira mamita 2 200 kubva pamusoro pegungwa
Kunyange zvakadaro, kubvira mumakore achangopfuura, vaparidzi vanoshingaira uye mapiyona vari kunyanya kuenda kunzvimbo dzisingawanzoshandwa. Kana kuri kunzvimbo dzine makomo, kune dzimwe nharaunda dzisiri nyore kusvika, dzinongosvikwa nemotokari dzinodhonza nemavhiri ekumberi neekumashure kana kuti pachishandiswa zvimota zvinofamba zvakarembera patambo.
Vaparidzi vari munharaunda yeSvaneti
Gore negore kubva muna 2009, bazi rekuGeorgia riri kutumira ungano mazita endima dzisina ungano, richikumbira vaparidzi kuti vaende kunoparidza ikoko. Vaparidzi vakawanda vari kuzvipira chaizvo kuti vakwanise kuenda.
Ana naTemuri Bliadze
Temuri naAna Bliadze vakanga vachangobva kuchata pavakaziva kuti kunharaunda ine makomo yeAjaria kwaidiwa vaparidzi vakawanda. Vakanga vachangobva kutenga sitendi yekuvakira imba. Asi apa vakanga vawana mukana wekuti vawedzere ushumiri hwavo.
Pakutanga vakanogara kuAjaria kwevhiki chete. Achiyeuka zvavakaona vachangosvika ikoko, Temuri anoti: “Vaparidzi veko vaifamba madaro marefu kuti vakwanise kusvika kunzvimbo dzine misha mishoma. Asi isu taiva nemotokari yaidhonza nemavhiri ekumberi neekumashure, saka ndakabva ndatoona kuti yaizobatsira chaizvo ikoko.”
Ana anoti: “Zvaisava nyore kuti titame nekuti tainge takajairana neungano yedu uye taisada kusiyana nemhuri yedu. Asi takaona kuti Jehovha aitikomborera.” Temuri naAna vava nemakore anopfuura matatu vachibatsira boka riri muKeda, taundi riri munharaunda yeAjaria.
Mapiyona Anotsvaga Nzira Yekuzviriritira Nayo
Mapiyona chaiwo enguva pfupi ari kubatsira chaizvo pakuparidza kunzvimbo dzisiri nyore kusvika. Nguva yekuti achibva kunzvimbo idzodzo payakakwana, mapiyona akawanda akaramba ariko kuti abatsire zvidzidzo zvawo zveBhaibheri kufambira mberi.
Hanzvadzi mbiri dzaipayona, idzo dzaiva nezita rakafanana rekuti Khatuna, dzakatumirwa kutaundi rinoyevedza rinonzi Manglisi. Hakuna Zvapupu zvaigara ikoko, asi hanzvadzi dzacho dzakabudirira chaizvo muushumiri. Mumwedzi wekutanga vakaitisa zvidzidzo zveBhaibheri 9, wechipiri 12, wechitatu 15, uye wechina 18! Saka vakaramba vari kuManglisi kuti varambe vachibatsira zvidzidzo zvavo zveBhaibheri.
Kuti dzizviriritire, hanzvadzi dzedu dzaifanira kuita mabhindauko. Vakawanda vanoshanyira Manglisi vanofarira zvinhu zvinogadzirwa ikoko nemapinecone, izvo zvinozivikanwa nekubatsira pautano. Saka pakutanga, hanzvadzi dzacho dzaiunganidza mapinecone anenge achiri girini kuti dzigadzire zvinhu zvacho, dzozonozvitengesa kumusika. Asi dzisingatombozvifungiri, dzakawana zvimwe zvaikwanisa kudzipa mari.
Rimwe zuva mumwe mukadzi wavaidzidza naye Bhaibheri akavaunzira twunhiyo. Akavaudza kuti huku yake yakanga yakandira mazai asingazvizivi, ndokuzongoona yava kuuya netwunhiyo. Saka aida kupa vadzidzisi vake veBhaibheri twunhiyo twacho. Mumwe wehanzvadzi dzacho aiva neruzivo rwekupfuya huku, saka vakatanga kabhizinesi kekuchengeta huku.
Mumwe wehanzvadzi idzi anoti: “Tichibatsirwa naJehovha, nehama nehanzvadzi dzemuungano uye nezvidzidzo zveBhaibheri, takakwanisa kugara kuManglisi kwemakore mashanu.” Pari zvino kwatova neboka rehama nehanzvadzi ikoko.
Khatuna Kharebashvili naKhatuna Tsulaia vari muManglisi
Kupayona Mundima Yemumwe Mutauro
Kubvira mumakore achangopfuura, muGeorgia makatanga kuuya vanhu vakawanda vaibva kune dzimwe nyika. Mapiyona akawanda akaona kuti iyi yainge iri ndima itsva yakanga yava kutanga. Saka vakatanga kudzidzira mitauro yakadai sechiArabic, chiAzerbaijani, chiChinese, Chirungu, chiPersian, uye chiTurkish.
Kunyange zvazvo mapiyona akawanda ava kupinda nemapoka uye ungano dzemimwe mitauro, vamwe vakatamira kune dzimwe nyika kuri kunyanya kudiwa vaparidzi vakawanda. Giorgi naGela vaiva nemakore ekuma20 pavakatamira kune imwe nyika yakavakidzana neGeorgia. “Taida kupa Jehovha zvakanakisisa zvataiva nazvo, saka kutamira ikoko kwakatibatsira kuti tinyatsozadzisa chido ichocho,” anodaro Giorgi.
Achiyeuka nguva yavakagara ikoko, Gela anoti: “Kushumira kwandakaita semukuru ndiri mundima yakadaro kwakandidzidzisa zvakawanda. Hapana chinofadza sekushandiswa naJehovha kuti ubatsire ‘makwai ake maduku.’”​—Joh. 21:17.
Giorgi anowedzera kuti: “Taisangana nezvipingamupinyi, asi takaisa pfungwa dzedu pabasa redu, uye hatina kumbodzoka shure. Tainzwa kuti ndizvo zvataifanira kuita.”
Pane imwezve hama inonziwo Gela, iyo yakashumira kuTurkey kwemakore mashoma. Anoyeuka kuti: “Pakutanga, ndainetseka chaizvo nemutauro weko, saka zvaiita kuti ndishayiwe mufaro. Kunyange zvakadaro, pandakanga ndava kukwanisa kutaura nehama nehanzvadzi dzangu dzaiva mundima yacho, zvakaita kuti mufaro wangu urambe uchiwedzera.”
Nino, uyo ava nemakore anopfuura 10 achipayona ari muIstanbul, kuTurkey, anotaura manzwiro ake achiti: “Ndakanyatsoona kuti Jehovha ainditsigira kubvira musi wekutanga chaiwo wandakauya kuno. Kupayona kunoita kuti mazuva ese usangane nezvinhu zvinonakidza zvakadai sezvatinonzwa ‘muBhuku Regore.’”